Free Thinker: ရပ်တည်မှု ခက်ခဲလာနိုင်သော စင်ကာပူရောက် နိုင်ငံခြားသားများ အခြေအနေ
စင်ကာပူရောက် နိုင်ငံခြားသားများအပေါ် စင်ကာပူနိုင်ငံသားများ မကြည်မလင်ဖြစ်နေခဲ့သည်မှာ ကြာပါပြီ။ သူတို့ထံမှ အများဆုံးကြားရသော complaint များမှာ ကား၊ ရထားများတွင် လူများအလွန်ကြပ်သိပ်လာမှု၊ စင်ကာပူနိုင်ငံသားများ အနေနှင့် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာတွင် ဈေးသက်သာပြီး ကျွမ်းကျင်သော နိုင်ငံခြားသားများနှင့် အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်နေရမှု စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် သူတို့ဤကဲ့သို့ ပြောဆိုနေကြသည်ကို သေချာစွာသိနိုင်ရန် စင်ကာပူတွင်ရောက်နေသော နိုင်ငံခြားသားများအကြောင်း တစေ့တစောင်း လေ့လာကြည့်ပါမည်။ ပထမဦးစွာ စင်ကာပူသို့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် သော်လည်းကောင်း၊ မိသားစုရှေ့ရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း ပြောင်းရွှေ့ဝင်ရောက်လာသော နိုင်ငံခြားသားဦးရေကို လေ့လာပါမည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်သော စင်ကာပူအစိုးရ စာရင်းအင်းများအရ ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ အနှစ် ၃၀ အတွင်း စင်ကာပူတွင် တိုးတက်လာသော လူဦးရေစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ Singapore Permanent Resident (SPR) များကို local သို့မဟုတ် resident များအဖြစ် သတ်မှတ် ပါသည်။ ထို Singapore Citizen (SC) နှင့် SPR များမှ ကြွင်းသော ကျန်သူများအားလုံးကို Non-Resident (Foreigner) များအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။
၎င်းကို ပိုပြီးထင်သာမြင်သာရှိစေရန် ရာခိုင်နှုံးဖြင့် ပြန်ပြောင်းလျှင် အောက်ပါဇယားအတိုင်းရပါသည်။
စင်ကာပူတွင် လာရောက်နေထိုင်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော နိုင်ငံခြားသားများ ဦးရေ (ရာခိုင်နှုံး)
ဤဇယားကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်းသို့ နိုင်ငံခြားသားများ ၀င်ရောက်လာမှုကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်တွေ့ နိုင်ပါသည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များက စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ပီအာအပါအ၀င် နိုင်ငံခြားသားဦးရေမှာ ၁၀ ရာခိုင်နှုံးမျှသာ ရှိသော်လည်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်သို့ရောက်သောအခါ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံသားစစ်စစ်မှာ ၆၄ ရာခိုင်နှုံးမျှပင် မပြည့်တော့ပါ။
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသားဦးရေ တိုးတက်လာမှုမှာ အောက်ပါဇယားအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါဇယားကို ကြည့်လျှင် စင်ကာပူသို့ နိုင်ငံခြားသားများ ၀င်ရောက်လာမှုမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးတက် များပြားလာခဲ့ရာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်များတွင် ၁၅ ရာနှုံးမှ ၁၉ ရာနှုံးထိ မြင့်တက်လာသည်ကို တွေ့နိုင် ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဤမျှများပြားလာသော နိုင်ငံခြားသားများအပေါ် စင်ကာပူနိုင်ငံသားများ မကျေမနပ်ဖွင့်အံလာချက်များကြောင့် ပြန်လည်လျှော့ချခဲ့ရာ ၂၀၁၀ တွင် ၄.၁ ထိ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤသို့လျှော့ချလိုက်သည့် အတွက်ပင် စင်ကာပူသို့လာရောက် အလုပ်ရှာသူ မြန်မာများအနက် အလုပ်မရဘဲ ပြန်သွားရသူ တိုးတက်များပြား လာခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် လက်ရှိလုပ်နေသူများကိုပင် သက်တမ်းတိုးမပေးခြင်း၊ တိုးပေးသည့်တိုင် အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ တိုးပေးခြင်း စသည်တို့ နှင့် ကြုံတွေ့ရလျှက် ရှိပါသည်။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များက စင်ကာပူ PR ရရန် အလွန်ခဲယဉ်းခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ၂၀၀၄ ဇူလိုင်တွင် Work Pass အသစ် တစ်မျိုးဖြစ်သော S Pass ကို ချထားပေးလိုက်ပြီး S Pass holder များအား PR လျှောက်ခွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဤသည်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘွဲ့ရလာသူများ၊ GTI အောင်လာခဲ့သူ အများအပြား PR ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် PR ချထားပေးခဲ့မှုမှာ ၁၁.၅ % ထိ မြင့်တက်ခဲ့၏။ သို့သော် ဤကဲ့သို့ PR ချထားပေးခဲ့မှုများကို ၂၀၀၉ နှစ်တွင် ပြန်လည်တင်းကျပ် ခဲ့ရာ ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံမှ GTI ပြီးလာခဲ့သူများပင် PR ရခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ NTU, NUS တို့မှ M.Sc ပြီးသူများကိုပင် PR ရရန် မသေချာသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်များက NTU တွင်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေသူ မြန်မာနိုင်ငံသူ M.Sc ကျောင်းသူ တစ်ဦးအား ကျောင်းတက်နေစဉ်က PR Offer letter (ကျောင်းပြီးလျှင် PR လျှောက်နိုင်ခွင့်) ပေးထားခဲ့သော်ငြားလည်း အမှန်တကယ် ကျောင်းပြီးလာသည့်အခါ ၎င်း စာကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကာ သူမလျှောက်ထားသည့် PR လျှောက်လွှာကို reject လုပ်ခဲ့ပါသည်။ သူမမှာ စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ အလွန်နာမည်ကြီးလှသော NTU (Nanyan Technological University) မှ M.Sc ဘွဲ့ရခဲ့သည့်တိုင် သင့်တော်သော အလုပ်တစ်ခုကို မရနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်သွားခဲ့ရပြီ ဖြစ်ပါ သည်။ သုံးနှစ်တာ ပညာသင်နှစ်အတွင်း ကုန်ဆုံးခဲ့သော ပညာသင်စရိတ် မြန်မာငွေ သိန်း ၂၀၀ ခန့် နှင့် သူမ၏ ကြိုးစား အားထုတ်မှုများအားလုံး အလဟဿ ဖြစ်သွားခဲ့ရပါသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံခြားသားများ အလုံးလိုက်အရင်းလိုက် စီးဝင်လာနေမှုကို ကန့်သတ်ရန် ပထမဦးဆုံး စင်ကာပူအစိုးရ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုမှာ Levy များအား တိုးမြှင့်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Levy များတိုးမြှင့်ကာ အလုပ်ခန့်ထားမှုများကို ကြပ်လိုက်ရုံသာမက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများလည်း လျော့ကျသွားခဲ့ရာ ယခုအခါ မြန်မာအများစုမှာ စင်ကာပူသို့ Visit Visa ဖြင့်လာရောက်အလုပ်ရှာရာတွင် အခက်အခဲ များစွာနှင့် ရင်ဆိုင်ရလျှက် ရှိပါသည်။ အလုပ်မရသူများ၊ အလုပ်ရသည့်တိုင် တင်လိုက်သည့် Work Pass ကျမလာမှု စသည် တို့ကြောင့် ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားရသူများ တစ်နေ့တခြား များပြားလာခဲ့ပါသည်။
စင်ကာပူအစိုးရမှ Foreign Worker Levy များကို အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့ရာ ယခု သတ်မှတ်ထားသော Levy များ မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါဇယားမှ Skilled ဟူသည်မှာ Low Levy စာမေးပွဲ အောင်ထားသူကို ခေါ်ပြီး Unskilled ဟူသည် High Levy တစ်နည်းအားဖြင့် Low Levy စာမေးပွဲ မအောင်ထားသူများကို ခေါ်ပါသည်။ Levy များအကြောင်း အသေးစိတ်သိလိုလျှင် ကျွန်တော်ရေးသော “အနာဂတ်တစ်ခု ဖန်တီးတည်ဆောက်ခြင်း” စာအုပ်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Tire 1: Work Permit ဦးရေသည် စုစုပေါင်း အလုပ်သမားအားလုံး၏ ၃၀ % အောက်သာ ရှိခြင်း
Tire 2: Work Permit ဦးရေသည် စုစုပေါင်း အလုပ်သမားအားလုံး၏ ၃၀% မှ ၅၀% ထိရှိခြင်း
Tire 3: Work Permit ဦးရေသည် စုစုပေါင်း အလုပ်သမားအားလုံး၏ ၅၀ % မှ ၆၅% ထိရှိခြင်း
Higher Skill : BCA မှ ထုတ်ပေးသော Trade Certificate ရှိပြီး စင်ကာပူတွင် ထိုအလုပ်နှင့် လုပ်သက် အနည်းဆုံး ၄ နှစ်ရှိသူ။ BCA မှ ထုတ်ပေးသော Trade Certificate အသေးစိတ်ကို http://www.bcaa.edu.sg/ListCPCF.aspx တွင်ကြည့်ပါ။
Tire 1: Work Permit ဦးရေသည် စုစုပေါင်း အလုပ်သမားအားလုံး၏ ၂၀ % အောက်သာ ရှိခြင်း
Tire 2: Work Permit ဦးရေသည် စုစုပေါင်း အလုပ်သမားအားလုံး၏ ၂၀% မှ ၃၅% ထိရှိခြင်း
Tire 3: Work Permit ဦးရေသည် စုစုပေါင်း အလုပ်သမားအားလုံး၏ ၃၅ % မှ ၅၀% ထိရှိခြင်း
ယခု စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသားများအား အလုပ်အကိုင် ခန့်ထားမှု အချိုးအစားကို လေ့လာကြည့် ပါမည်။
နိုင်ငံသားများနှင့် နိုင်ငံခြားသားများအား အလုပ်ခန့်ထားမှု အခြေအနေ (2010 Labor Force Survey Findings)
ဤသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံခြားသားများအား အလုပ်ခန့်ထားမှုကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့နိုင်ပါသည်။
ဤဇယားကိုကြည့်လျှင် စင်ကာပူနိုင်ငံသားများ အဘယ်ကြောင့် အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားမှုအပေါ် ဒေါသထွက်နေ ရသနည်း ဆိုသည်ကို ထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အားလုံး၏ ၃၅ ရာခိုင်နှုံး (သုံးပုံတစ်ပုံ) ကို နိုင်ငံခြားသား များက နေရာယူထားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ (နိုင်ငံခြားသားဟု ဆိုရာတွင်ပင် စင်ကာပူပီအာများ မပါသေး ဆိုသည်ကို သတိပြုရန် လိုပါသည်။)စင်ကာပူမှ အလုပ်လက်မဲ့နှုံး မှာ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၁ စာရင်းများအရ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဇွန်လ၊ ၂၀၀၉ - ၄.၅ % (ဦးရေအားဖြင့် - ၉၀၃၀၀)
ဇွန်လ၊ ၂၀၁၀ - ၃.၂ % (ဦးရေအားဖြင့် - ၆၅၅၀၀)
ဇွန်လ၊ ၂၀၁၁ - ၃.၀ % (ဦးရေအားဖြင့် - ၆၂၇၀၀)
ယခု ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဇူလိုင်လ၌ မတ်လကထက်စာလျှင် အလုပ်လက်မဲ့နှုံး အနည်းငယ် မြင့်တက်လာ သည်။ အကြောင်းမှာ တက္ကသိုလ်ပညာပြီးဆုံးသူများ အလုပ်ရှာမှု ပိုမိုများပြားလာသည့်အတွက် ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုစာရင်းအရ စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်နေသူဦးရေ စုစုပေါင်းမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒုတိယလေးလပတ်၌ ၃၁၅၆၉၀၀ (၃ သန်း ၁ သိန်းကျော်) ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
ဤသည်ကို ကြည့်လျှင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ အတွင်း အလုပ်လက်မဲ့နှုံးမှာ လျော့ကျသွားသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ သို့ဆိုလျှင် ပြီးခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံခြားသားများ ၀င်ရောက်လာမှုကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ တိုးလာမလာ လေ့လာကြည့်ပါမည်။
အထက်ပါဇယားအရ အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေမှာ ၂၀၀၁၊ ၂၀၀၂၊ ၂၀၀၃ တွင်သာ အနည်းငယ် တိုးမြင့်လာပြီး နောက်ပိုင်းနှစ်များ၌ ပြန်လည်လျော့ကျသွားသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ နိုင်ငံခြားသားများ တိုးတက်ဝင်ရောက် လာသလောက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများလည်း ပေါများလာခဲ့သည်။ သို့အတွက် ဌာနေ စင်ကာပူနိုင်ငံသားများ၏ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုအပေါ် ထိခိုက်မှုမရှိပါဟု သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံခြားသားများ ၀င်ရောက်လာနေမှုကို ကန့်သတ်ရန် ဒုတိယအကြိမ် စင်ကာပူအစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှာ အခြေခံလစာများအား တိုးမြှင့်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စင်ကာပူတွင် အခြေခံလစာများကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်က သတ်မှတ် ပြဌာန်းပေးလိုက်ပြီး (ငွေဖောင်းပွမှု များရှိနေသည့်တိုင်) မပြင်ဘဲ ထားခဲ့သည်မှာ ၁၀ စုနှစ်တစ်ခုမျှ ကြာခဲ့ပါပြီ။ ယခုမူ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်ခန့်ထားမှုကို တင်းကျပ်နိုင်စေရန် အခြေခံ လစာများကိုလည်း ပြင်ဆင်ခဲ့ရာ ယခုနှစ်တစ်နှစ်တည်းအတွင်းတွင်ပင် နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။
ယခင်က အခြေခံလစာ နှုံးထားများမှာ (၂၀၀၄ ခုနှစ်အလွန်နှစ်များက) -
P1 Pass: S$7000 - ဖြစ်၏။
NDP 2011 (National Day Parade Rally) တွင် စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ လီဆင်လုံး ပြောသွားသည့် မိန့်ခွန်းမှ ကျွန်တော်တို့နှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေသော အကြောင်းများကို အောက်တွင် အတိုချုပ် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ၀န်ကြီးချုပ်၏ မိန့်ခွန်းမှာ အလွန်ရှည်လျှားလှသည်ဖြစ်ရာ လိုသလောက်သာ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
၀န်ကြီးချုပ်က အိမ်ဝယ်ခြင်း၊ ငှားခြင်း နှင့် ပညာရေးတွင် Singaporeans come first ဟုဆိုကာ ယခုနှစ်တွင် အိမ်သစ် ၂၅၀၀၀ ဆောက်ပေးမည်။ လာမည့်နှစ်တွင်လည်း အလားတူပင် အိမ်သစ် ၂၅၀၀၀ ထပ်မံဆောက်ပေးဦးမည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံသားများ အိမ်ဝယ်နိုင်ရန် မည်သို့ စီစဉ်ထားသည်။ အိမ်မ၀ယ်နိုင်သည့် အနည်းငယ်သော နိုင်ငံသားများ အတွက်လည်း ငှားနေနိုင်ရန် အိမ်ခန်း ၇၀၀၀ စီစဉ်ထားသည် စသည်ဖြင့် ကတိပေး ပြောကြားသွားပါသည်။
ထို့ပြင် တက္ကသိုလ်တက်ရမည့်အရွယ်ရှိသူ လေးဦးတွင် တစ်ဦးသည် တက္ကသိုလ်ပညာကို သင်ယူနေကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံသား တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ၁၂၀၀၀ ရှိကြောင်း။ လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်ကမူ စင်ကာပူနိုင်ငံသား တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ၉၀၀၀ မျှသာရှိကြောင်း။ နောင်လာမည့် ၄ နှစ်အတွင်း နိုင်ငံသားများအတွက် တက္ကသိုလ်တွင် နေရာ ၂၀၀၀ ထိ ထပ်မံလက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံသား တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ၁၄၀၀၀ ထိ ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း။
စင်ကာပူပိုလီကျောင်းသား တစ်ဦးက ၎င်းအား S Pass တစ်ဦးအနေနှင့် လခ ၁၈၀၀ ရနေချိန်တွင် ပိုလီကျောင်းဆင်း ဒီပလိုမာတစ်ဦးအနေနှင့် သည့်ထက်ပိုသော လခရကြောင်း၊ သို့သော် ထို S Pass များသည် အလုပ်ရှာချိန်တွင် ၎င်းတို့၏ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်နေခဲ့သည် ဟု ပြောခဲ့ကြောင်း။ ထို့ကြောင့်ပင် S Pass အခြေခံလစာများကို ၁၈၀၀ မှ ၂၀၀၀ သို့တိုးမြှင့်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း။ သို့တိုင် လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ ဆက်လက်လိုအပ်နေဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း။
နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် စင်ကာပူစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ထိပ်ပိုင်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ကျွမ်းကျင်သောစီးပွားရေးပညာရှင်၊ လုပ်ငန်းရှင်များလိုနေသေးကြောင်း။ မိမိတို့ အစိုးရလုပ်ကိုင်နေသည် များကို လေ့လာကြည့်လျှင် အောက်ခြေကိုသာ တင်းကျပ်နေသော်လည်း ထိပ်ပိုင်းကို ဖွင့်ပေးထားတာ တွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။ ထိပ်ပိုင်းနှင့်အောက်ခြေအကြား အလယ်အလတ်တန်းစား ကျွမ်းကျင်သူပညာတတ်များအတွက်မူ ထပ်မံ ထိန်းညှိရန် လိုကြောင်း၊ ထိုသူအများစုမှာ Employment Pass (EP) holder များ ဖြစ်ကြောင်း။
အစိုးရအနေနှင့် နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများကို တင်သွင်းခြင်းတွင် လိုအပ်သည့်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုသည့်တိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မူ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများမှာ မရှိမဖြစ် ဆက်လက်လိုအပ်နေဦးမည်သာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားပါသည်။
လက်ရှိ EP များကို တစ်နှစ်သာ သက်တမ်းတိုးပေးမည်။ ယခုနှစ်ကုန်လျှင် ၂၀၁၂ မှစကာ လခနှုံးထား အသစ်ဖြင့် ထပ်မံလျှောက်ရမည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဤအပြောင်းအလဲသည် ၃ သောင်းမျှသော အချို့ EP များအား အကျိုးသက်ရောက်မည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် MOM က နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားခန့်ထားမှုကိုမူ စုစုပေါင်း လုပ်သားဦးရေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ၌ ထိန်းထားမည်ဟု ဆိုပါသည်။
၎င်းတို့အဆိုအရ စင်ကာပူစီးပွားရေး ဦးမော့လာချိန် ၂၀၁၀ တွင် EP လျှောက်ထားမှု သိသာစွာ မြင့်တက်လာပြီး ၂၀၁၀ ဇွန်လမှ ၂၀၁၁ ဇွန်လအတွင်း ၁၄% မှ ၂၈ % ထိ နှစ်ဆမျှ မြင့်တက်လာသည်။ ၎င်းကို ထိန်းရန် ယခုကဲ့သို့ လခများ ပြင်ရပါသည် ဟု ဆို၏။ ယခုအခါ EP Holder ၁၄၂၀၀၀ ထိ ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
သို့သော်လည်း ၀န်ကြီးချုပ်က ဤကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားသားများ၏ လည်ပင်းကိုညှစ်လိုက်ခြင်းသည် စင်ကာပူနိုင်ငံသားများ အား အော်တိုမက်တစ် လခကောင်းကောင်း၊ နေရာကောင်းကောင်းသို့ ရောက်ရပါစေမည်ဟု အာမခံခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ သင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ရမည်မှာ စင်ကာပူရောက် နိုင်ငံခြားသားများသာမဟုတ်ပဲ ကမ္ဘာ့အဆင့် လုပ်သားများဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောသွားတာလည်း တွေ့ရပါလေသေး၏။
အထက်ပါသတင်း ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ထိုသတင်းအပေါ် ဆွေနွေးချက် ၅၀၀ ခန့်ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ အချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါ၏။ မူရင်းဖတ်လိုသူများ http://sg.news.yahoo.com/blogs/singaporescene/mom-tightens-employment-pass-criteria-111607991.html တွင် ဖတ်နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ဆိုလျှင် ပျင်းစရာကြီးဖြစ်မှာစိုးပါသဖြင့် လိုတိုရှင်းပဲ ရေးလိုက်ပါ သည်။
- ဒါဆို လခကို ၁၈၀၀ ဆိုပြီး အလုပ်ရှင်ကို ပြန်ပေးနေရတဲ့ သူတွေကျတော့ ဘယ်လိုပြောမလဲ။ ဆိုလိုတာက ပေးတဲ့ လစာကတော့ ၁၈၀၀ ဟုတ်ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ရတာက ၁၅၀၀ ပဲဖြစ်ပြီး ၃၀၀ ကို အလုပ်ရှင်ကို ပြန်ပေးလိုက်ရတာ။ S Pass ဆိုပေမဲ့ တချို့ဆို ၁၂၀၀ ပဲရတယ်။ တချို့ ၁၀၀၀ ပဲရတယ်။
- ဒီလို လခတိုးလိုက်တဲ့အပေါ် အလုပ်ရှင်တွေကတော့ ပျော်နေမှာပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က လခ ၃၀၀၀ ပေး ပါတယ်လို့ ပြမယ်။ တကယ့်တကယ်ကျတော့ ၂၂၀၀ ပဲပေးမယ်။ သူတို့က သပိတ်ဝင်အိတ်ဝင် တစ်လကို ၈၀၀ အမြဲ ပြန်ရနေမယ်။ တစ်ခါ Income Tax ပေးဘို့ကျတော့ အဲဒီ ၈၀၀ ပါ ထပ်သက်သာသွားပြန်တယ်။ ဒီလို လခ ပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားတွေ ၀င်လာမှုကို ထိန်းနိုင်ပါ့မလား ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာပဲ။
- အလုပ်သမားတွေက အလုပ်ရှင်ကို ဒီလိုပြန်ပေးနေရတယ် ဆိုတာ MOM အရာရှိတွေ သိနိုင်တာပဲ။ ဒါဖြင့် ဒီကိစ္စ ဘာကြောင့် အရေးမယူဘဲ ရေငုံနေကြသလဲ။
- သူတို့ဘယ်လိုပြောင်းပါတယ် ဆိုစေ။ ဒီလို လိမ်ညာမှုတွေကတော့ အလုပ်ခန့်ထားရေးမှာ ရှိနေဦးမှာပဲ။ ဒီလို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားတွေကို ထိန်းနိုင်တယ် လို့ပြောတာ ဦးဏှောက်မရှိတဲ့သူတွေကိုပဲ ညာလို့ ရမှာပေါ့ကွယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါတို့မှာလည်း တွေးတတ်ခေါ်တတ်တဲ့ ဦးဏှောက်ရှိတယ်ဆိုတာ မေ့မထားစေချင်ဘူး။
- ဒီမှာ အလုပ်သမားတွေကို အလိမ်အညာ လခတွေနဲ့ခန့်နေတယ် ဆိုတာ MOM လူကြီးမင်းများကလွဲလို့ တစ်နိုင်ငံ လုံးသိတယ်။ MOM လူကြီးမင်းများခင်ဗျာ၊ စင်ကာပူတစ်ကျွန်းလုံးက ကော်ဖီဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဟာ သူတို့ဆီက ပြည်ကြီးတရုတ် ၀န်ထမ်းတွေဆီက ပိုက်ဆံတွေကို ပြန်ယူနေပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ စားပွဲမှာထိုင်ပြီး ငိုက်မျဉ်းနေ မဲ့အစား အရေးယူဆောင်ရွက်ကြဘို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
- ဒီနေရာမှာ မစ္စတာ Tharman ကျန်ခဲ့တာတစ်ခု ပြောချင်ပါတယ်။ သူက နိုင်ငံခြားသားလို့သာ ပြောတာပါ။ တကယ်ဆို PR တွေနဲ့ ခုမှ ဖြစ်လာတဲ့ အသစ်ကျပ်ချွတ် စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေကိုရော ထည့်မတွက်သင့်ဘူးလား။ သူတို့လဲ ကျုပ်တို့ကို ပြိုင်နေတာပဲ။ ငါတို့မှာ စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေနဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ ဟာတွေ ရှိပြီးသားပဲ။ ဘာနောက်ထပ်မှ hawkers, lounge hostesses, KTV hostesses, cleaners, bartenders, sales assistants, warehouse workers etc တွေမလိုတော့ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ဟာ တကယ့်စင်ကာပူနိုင်ငံသားစစ်စစ်တွေအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားတာများရှိပါသလား လူကြီးမင်းများ ခင်ဗျား။
- ၂၀၁၀ မှာ စင်ကာပူမှာ မွေးတဲ့သူ စစ်စစ်ဟာ 57.36% ပဲ ရှိပါတယ်။ 43% က နိုင်ငံခြားသားလို့ ခေါ်ရမဲ့ ဟာတွေပါ။ အလဲ့ကွယ်၊ သဟာဖြင့် Singapore လို့ခေါ်မဲ့အစား Chinapore, Indiapore and Earthpore လို့ပဲ ခေါ်လိုက်ကြပါ စို့ရဲ့ အရပ်ကတို့။
- Silverman 10 hours ago
2) Overtime work - (Field Allowance & TV Crew provided)
a- Go to field - Wet market and hawker center.
b- Shake anyone hand and "Say hello and how are you"
and quickly go to next person or next table...repeat again.
Salary : 1 million - Singapore Dollars
(တစ်ယောက်က ကလေးချီပြီး ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံရမယ် ဆိုတာပါ ထပ်ထည့်ထားလိုက်သေး)။
Singapore Business Federation (SBF) ၏ CEO ဖြစ်သူ Mr. Ho Meng Kit က Levy များကို မြှင့်တင်ပြီး မကြာမတင်မီမှာ ပင် ယခုကဲ့သို့ လုပ်ခလစာများကို ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံခြားသား လုပ်သားများ သိသာစွာကျဆင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပဲ အလုပ်ရှင် များ များသောအားဖြင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (Small and Medium Enterprises) ကို ကုန်ကျ စရိတ်များသာ တိုးမြင့်လာစေမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရအနေနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံသားများကို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ကောင်းမွန်လာစေရန် ဖန်တီးပေးရာတွင် PME (professional, manager, executive) အပါအင် အချို့အလုပ်များမှာ စင်ကာပူ နိုင်ငံသားများကို ဆွဲဆောင်မှုအားနည်းနေသေးတာကို လက်ခံရန်လိုကြောင်း ၊ EP နှင့်ပတ်သက်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ရာတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ အသံကိုလည်းနားထောင်ရန်လိုကြောင်း၊ EP များခန့်ထားမှုကို လျော့ကျသွားစေမည့် ပြင်၊ EP များခန့်ထားသည့် လုပ်ငန်းများကိုပါ ထိခိုက်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့ပါသည်။
Tighter Employment Pass criteria could make S'pore less attractive
DBS မှ senior economist ဖြစ်သူ Irvin Seah က ဒီလိုလုပ်လိုက်တာဟာ သူရမဲ့လခနဲ့ သူ့အရည်အချင်း၊ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံတွေကို ညီမျှအောင်လုပ်ပေးတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြေခံလစာတွေကို ငွေဖောင်းပွမှုနှုံးနဲ့အညီ ပြင်မပေးခဲ့တာ ခုဆို ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတောင် ရှိသွားပါပြီ။ ဒီလိုလုပ်တာဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေ ၀င်လာမှုကို ဟန့်တားတာမှန်ပေမဲ့ တစ်ဖက်မှာ သူတို့ရဲ့ အရည်အချင်းကို ပိုမြင့်လာအောင် ကြိုးစားစေဘို့ တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဟု ပြောပါသည်။
Singapore Business Federation (SBF) က အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းရှင်များအနေနှင့် လက်ရှိတွင် သူတို့လုပ်ငန်း ကို ချဲ့ထွင်ရန် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရချိန်၌ ယခုလို လုပ်လိုက်ခြင်းသည် ပိုမို၍ ခက်ခဲစေကြောင်း ပြောပါသည်။
ထို့ပြင် လုပ်ခများတိုးမြှင့်ရန် ဖိအားပေးခြင်းသည် ငွေဖောင်းပွမှုနှင့် နေထိုင်မှုစရိတ်မြင့်မားစေကြောင်းလည်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
CIMB Research မှ Regional economist ဖြစ်သူ Song Seng Wun က နာ့စ်ကဲ့သို့သော အလုပ်များတွင် ပေးထားသည့်လခ မှာ စင်ကာပူနိုင်ငံသားများအတွက် ဆွဲဆောင်မှုမရှိသော်လည်း နိုင်ငံခြားသားများကိုမူ ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိနေသေးကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းကို တိုးချဲ့ရာတွင် ရာထူးအများအပြားကိုလည်း တိုးချဲ့ခန့်ထားရမှာ ဖြစ်သည့်အတွက် ကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ် ပိုမိုမြင့်မားလာစေမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောပါသည်။
အချို့ကတော့လည်း ဤကဲ့သို့လုပ်ခြင်းဖြင့် ရေရှည်မှာ အကျိုးရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ကြပါသည်။
မစ္စတာလီ (၀န်ကြီးချုပ်) အား စင်ကာပူပိုလီကျောင်းသားတစ်ဦးက Work Permit ထက် တစ်ဆင့်မျှသာ ပိုမြင့်သည့် S Pass တစ်ဦးကို လခ ၁၈၀၀ ပေးရန် အဘယ်ကြောင့် သတ်မှတ်ထားပါသနည်း ဟု မေးသည် ဆို၏။ ဆိုလိုသည်မှာ ထို S Pass များအနေနှင့် လခ ၁၈၀၀ သာရသော်လည်း ထို့ထက်မကပိုရနေသော ဒီပလိုမာလက်မှတ်ကိုင် ၎င်းတို့နှင့် အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရာတွင် ပြိုင်ဘက်ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင် ယှဉ်ပြိုင်ခိုင်းပါ ဟု ဆိုသတည်း။
၀န်ကြီးချုပ်ကတော့ သူတို့ ခံစားချက်ကို မိမိနားလည်ပါသည်။ သို့သော်လည်း စင်ကာပူနိုင်ငံသားများနှင့် မလုံလောက်သော နေရာများတွင်မူ နိုင်ငံခြားသားများကို မလွှဲမရှောင်သာ သုံးနေရဦးမည် ဟု ပြောခဲ့ကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
စင်ကာပူရောက် ကျွန်တော်တို့၏ အနေအထားမှာ စင်ကာပူအစိုးရချမှတ်သော မူဝါဒများအပေါ် လုံးဝ မှီခိုနေရ ပါသည်။ ဥပမာပြရလျှင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မတိုင်မီနှစ်များက စင်ကာပူပီအာ ဖြစ်ဖို့ရန် ခဲယဉ်းခဲ့သော ကျွန်တော်တို့မှာ အစိုးရ မူဝါဒ ပြောင်းလိုက်သည်နှင့် မြန်မာအများအပြား ပီအာများ ဖြစ်၊ မိမိတို့မိသားစုကို မြန်မာပြည်မှခေါ်။ ကလေးများကို စင်ကာပူတွင် ကျောင်းထား။ အိမ်များဝယ်ကြ စသဖြင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း များစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ပီအာချထား ပေးမှုများ တင်းကြပ်လိုက်သည့် ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်မူ ပညာရေး၌ အဆင့်မြင့်ဘွဲ့ရခဲ့သူများပင် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ရပ်တည်ဘို့ရာ မနည်းရုန်းကန်ရသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။
ပညာရဲရင့် ပွဲလယ်တင့် ဟူသော မြန်မာစကားပုံမှာ သွေးထွက်အောင် မှန်လှပါသည်။ မိမိအနေနှင့် အတတ်ပညာ တစ်ခုကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် (professional) တတ်မြောက်ထားပါမူ စင်ကာပူတွင်သာမက မည်သည့်နိုင်ငံသို့ သွားသည် ဖြစ်စေ သင့်တော်သောရာထူးတွင် အခြားသူများရရှိသောလခထက် မနည်းပဲ အလုပ်အကိုင်များရရှိနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် လည်း မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူ စသော အာရှနိုင်ငံများတွင်သာမက ဥရောပ၊ အနောက်နိုင်ငံများတွင်ပါ အလုပ်လုပ်နေကြသော မြန်မာလူမျိုး ပါမောက္ခများ၊ ကထိကများ၊ မန်နေဂျာများ၊ စီနီယာအင်ဂျင်နီယာများ၊ အင်ဂျင်နီယာများ၊ IT ပညာရှင်များ၊ စာရင်းအင်းပညာရှင်များ များစွာရှိပါသည်။
အဆိုးထဲမှ အကောင်းကို ရှာရလျှင် စင်ကာပူနိုင်ငံအနေနှင့် ယခုကဲ့သို့ အခြေခံလစာများ တိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့အား ထိုလခနှင့်ထိုက်တန်မည့် အရည်အချင်းများရှိလာအောင် ကြိုးစားစေဘို့ရန် တွန်းအားတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံအနေနှင့် နိုင်ငံကငယ်ပြီး လူအင်အားအရင်းအမြစ်အပေါ် လုံးဝနီးပါး အားထားနေရခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ယခု ကဲ့သို့ နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံခြားသားများအား ၎င်းတို့၏ အရည်အသွေးများတိုးတက်လာအောင် တွန်းအားပေးရခြင်းမှာ သဘာဝ ကျပါသည်။
အားလုံးကို ချုပ်ရလျှင် စင်ကာပူတွင် ရေရှည်ရပ်တည်ရန် စိတ်ကူးထားသူများ၊ စင်ကာပူတွင် အလုပ်လာလုပ်ရန် စိုင်းပြင်းနေသူများအနေနှင့် တိုးလိုက်သောလခများအားလျော်စွာ မိမိတို့ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများ တိုးမြင့်လာစေရန် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း။ အတတ်ပညာမရှိသူ၊ လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်သူများ အနေနှင့်မူ ရေရှည်ရပ်တည် ဘို့ရန် ခဲယဉ်းလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
မြန်မာအချင်းချင်း၊ လှည့်ပတ်ချင်း၊ ကင်းရှင်းကြပါစေ။
Posted by အေးငြိမ်း at 4:16 PM
Nanda Lynn said...
Thank you so much for your post. I got so many knowledge when I read your post.
Your articles always give benefit for readers.
Myo Aung Lin said...
With deeply thanks,
Myo Aung Lin